HYPERCAN: Ajọ ifufe kachasị ike nke nwere ike ịdị! | Netwọk Mgbasa Ozi
Hypercan, nke ahụ bụ aha ndị ọkà mmụta sayensị kpọrọ aha ga-abụ oke ifufe kachasị ukwuu nke nwere ike ịdị n'ụwa, nke na-egosiputa udi nke 5 nke na-egosi oke oke nke nhazi nke oke ifufe dika Saffir-Simpson. Ọ dịbeghị mgbe ọ bụla, mana enweghị ike ịchịkwa ịdị adị ya, ọ bụ ezie na maka nke a, anyị kwesịrị ịnọ n'ihu ezigbo ọnọdụ. Ozizi a na-egosi na ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a adị, enwere ike ịmepụta Hypercan, ee e, anyị adịghị akwadebe maka ya.
The Hypercan bụ Mega Ajọ Ifufe na 800km / h ifufe, a ọsọ dị nnọọ nso ọsọ nke ụda nke 1235km / h. Iji nweta echiche, anyị ga-enwe otu ikuku ikuku a nke atọmịk atọm na-ewepụta, dị nso ebe ọ na-aga. Ifufe ndị a ga-aga n'ihu ibibi ihe niile dị n'okporo ụzọ ha, yana ọkwa nke oke iwe na-ahụtụbeghị mbụ. Ọ nwere ike ịdị ka ọ dịpụrụ adịpụ nke iche echiche. N'ezie ọ bụ, mana enwere ọtụtụ ọnọdụ enwere ike ịpụta.
1 Ọnọdụ maka Hypercan ka ọ pụta
2 Ihe egwu di na Hypercan
2.2 Nha na ikuku usoro
Ọnọdụ maka Hypercan ka ọ pụta
Nke a oké ifufe enwere ike ịmụ ya site na ngwakọta nke ihu igwe dị n'okirikiri nke 48'C. Ọ ga-adị ezigbo ọkụ na mbara ụwa anyị maka oke osimiri na oke osimiri iji deba ọnọdụ okpomọkụ ndị a. Ma naanị na nnukwu ugwu mgbawa na-agbapụta n'okpuru osimiri, na-eme ka mmiri kpoo ọkụ, ga-abụ otu n’ime ihe ndị nwere ike ibute ọnọdụ okpomọkụ ndị a dị mma maka nhazi ya.
Nhọrọ ọzọ ga-abụ na-ekpo ọkụ site na ọdịda nke nnukwu meteorite na mmiri, nke ahụ bụkwa ohere ọzọ nke ga - eme ka ọnọdụ okpomọkụ daa. Ọ bụ ezie na nke ahụ ga-ekwe omume. Ihe edere bụ nke nnukwu ugwu nke gbawara na mmiri n'okpuru mmiri ihe dị ka 250 nde afọ gara aga. E bibiri ọtụtụ n’ime ụdị ndị dị n’oge ahụ.
Okpomoku di nwayọ nwayọ nwayọ na-aga n'ihu n'ihi mgbanwe ihu igwe. Agbanyeghi ogo kachasị edere edere nke 35ºC na mmiri bụ 13ºC site na 48ºC nke a ga-achọ, ikpo ọkụ na-aga n'ihu na ha nwere ike ịbụ nsonaazụ ọzọ. Ka mmiri na-ekpokwu ọkụ, ohere ka ifufe na ike ime ihe ike ga-adịwanye.
Ihe egwu di na Hypercan
Ọbụghị naanị na ha ga-abịa n'otu ụzọ, Hypercan bụ ihe ga - enwe nsogbu pụrụ iche maka etu o siri dị. N'ihe doro anya, ọ ga-agbanwe ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe. Ihe ndị na-esonụ ga-abụrịrị ihe kacha mkpa.
Dị ka anyị kwurula, otu n’ime ha bụ ajọ ifufe mega ga-enwe. Ifufe 800km / h dị ogologo ga-adị na Fujita-Pearson, ọkwa F9. Dabere na ogo ya, enwere akpịrịkpa ndị a ugbu a:
Ọkwa F0 (ifufe nke 60/117 km / h): Dị nwayọọ. Alaka osisi na-agbaji, na-efe ahihia.
F1 (117/181 km / h): Agafeghị oke Ha nwere ike imebi taịl nile, gbasaa windo, kwaga ụgbọ ala, kpoo trailers, gbanye ụgbọ mmiri, gbajie osisi.
F2 (181/250 km / h): Tụle. A na-ebuli elu ụlọ ụfọdụ, trailers, bọs na ụfọdụ ụlọ ndị na-esighị ike. N’ụdị ikuku a, ụgbọ oloko nwere ike ịgbapụ.
F3 (251/320 kilomita / h): Uli. Enwere ike ibupụ osisi, mgbidi na elu ụlọ ndị siri ike.
F4 (321/420 km / h): Na-emebi. Gbọ oloko, gwongworo karịrị tọn 40, nwere ike ịtụba n'ime ikuku.
F5 (421/510 km / h): Ebibi oke. Na ifufe yiri ike nke ọ na-ebibi atọm. A na-adọka ụlọ niile si na ala ma na-agbapụ.
F6 (511/612 km / h): Mmebi fọrọ nke nta ka a ghara ichetụ n'echiche. Edere oke mmiri ozuzo na Oklahoma na 1999 n'oge oge mmiri ozuzo nwere oke 512km / h.
Ọ baghị uru ikwu, F9 ga-ahapụ ebe nke oke mkpọmkpọ ebe, nke anyị na-enweghị ike ịkọwa ma ọ bụ mata.
Nha na ikuku usoro
Ọ bụ ezie na ọ ga-enwe obere mpaghara oke ikuku nke 25km ^ 2, ikuku ikuku ya ga-eru elu karịa ikuku karịa oke ifufe. Usoro ikuku ga-abụ oke nke United States. Anya nke ajọ ifufe ahụ ga-atụle 300km na dayameta.
Mmiri mmiri ọkụ ebe Hypercan malitere, na-eburu n'uche nke ahụ mgbanwe nke okpomọkụ na mmiri bụ usoro nwayọ nwayọ ma nwekwuo ọtụtụ ndọtị, ha nwere ike ibute ọtụtụ hypercanes.
Na mgbakwunye, igwe ojii nke hypercan nwere ike iru 30km n'ịdị elu. Nke a ga - ebute ọgba aghara nke oyi akwa ozone, n'ihi na ụmụ irighiri mmiri ga - abịakwute ya ma mepụta mmeghachi omume ebe ha ga - abanye na mkpụrụ ndụ O2, na - eme ka filtration nke ultraviolet pere mpe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » HYPERCAN: Ajọ ifufe kachasị ike nke nwere ike ịdị!
Sulfuric acid nwere ike zoo mmiri n’elu ụwa ekele Donald Trump
Anyị nwere afọ 3 iji zere ọdachi ihu igwe